पेटका बिरामीले दसैंमा के खाने के नखाने?
डा शशी शर्मा
हामी दैनिक जीवनमा जुन भोजन गरिरहेका हुन्छौं, चाडबाड आएपछि अलि फरक पर्न जान्छ। दसैं वा अरु चाडबाड भनेपछि धेरै पकवान बनाउने, बढी खाने, मासु खाने, चिल्लो तथा गुलियो खाने गरिन्छ। हामी खानेकुरा त खान्छौँ तर समयमा खाँदैनौ‌ं।
कोही पूजा छ भनेर ढिलो खाइरहेका हुन्छन् भने कोही तास खेल्दा खानेकुराको पत्तो नै पाउँदैनन्। या तास खेल्दै बियर खाँदै गर्दछन्। त्यसैले दैनिक जीवनमा यसले प्रभावित पारिराखेको हुन्छ। निरोगी मानिसलाई त यसरी 18मा परिवर्तन आउँदा असर पर्छ भने रोगी मानिसलाई त प्रभावित नपार्ने कुरै भएन।
न खाना समयमा न त सुत्ने रुटिन समयमा। त्यसैले मानिसमा ग्यास्ट्रिकको समस्या देखापर्न थाल्छ। पेट गडबडी हुने हुन्छ। धेरैलाई एसिडिटीको समस्या हुने गरेको छ।
चिल्लो पिरोले एसिडिटी हुन्छ। अगाडिदेखि नै पेटका समस्या भएका मानिसलाई झन् धेरै पिरोल्छ। खालीपेट बस्ने र समयमा नखानाले पनि एसिडिटी बढ्छ। सुरुका एक–दुई दिन त नहोला तर तेस्रो दिनदेखि पेट दुख्ने, बान्ता आउने हुन्छ। त्यसअलावा झाडापाखाला लाग्ने तथा पेटमा गडबडी आउन थाल्छ। फुड प्वाइजन हुन्छ।
मन्दिरमा जानुस् या अरु घरायसी काममा, समय बिताउँदा केही खानेकुरा खानुस्। खाली पेटमा नबस्नुस्। दूध अथवा फलफूल केही खानुस्। अरु बेलाको जस्तो सामान्य खानुस्। मासुमा चिल्लोपिरो नै बढी हाल्ने, फ्राइ नै खानुपर्छ भन्ने छै। त्यस्तो खान बन्द गर्नुस्, त्यसले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन।
पक्कै पनि यस बेला अरु समयमा भन्दा मासु बढी खाइन्छ होला तर पकाउँदा चिल्लो कम हाल्नुस् र राम्ररी पकाउनुस्। त्यस्तै खानेकुरा एकदिन आफ्नोमा खाने अर्कोदिन अर्को साथीकोमा खाने गर्दा मानिसले चाहिनेभन्दा बढी धेरै खाइरहेको हुन्छ। बढी खाँदा पेटले सहँदैन, त्यसपछि पेटको समस्याले समातिहाल्छ।
मान्छेमा दसैं त हो नि आजलाई खाइदिउँ भन्ने मान्यता छ। साथीभाइहरुको इच्छामा पनि धेरै खाइदिने गर्दछन् मानिसहरु। कोहीले भर्खरभर्खर रक्सी छोडेको हुन्छ, दसैं त होनी खाइदिउँ भनेर बढी मात्रामा सेवन गर्न पुग्दछन्।
छोडिसकेको मान्छेले पनि फेरि खान सुरु गर्छ। दसैंको बेलामा खान देउ भन्ने हुन्छ। घरपरिवारले पनि यतिबेला रोकतोक गरेको पाइँदैन।
आममानिसले ड्रिंक्समा बियरले खासै नराम्रो गर्दैन भनेर सोच्छन् तर यथार्थ के हो भने सबैभन्दा खराब ड्रिंक्समा पर्छ बियर। एक गिलास बियरले पनि एसिडिटी बढाउने हुन्छ, अमिलो पानी आई छाती पोल्ने हुन्छ। अरु ड्रिंक्सको त कुरै नगरौँ। झन् यसबेला साथीभाइ जमघट भएपछि मासु र बियर बढी खाइरहेका हुन्छन्। आफूले कतिसम्म खान सक्छु भनेर नियन्त्रित भएर खान जरुरी छ।
उच्च रक्तचाप, कलेजो, मिर्गौलाका समस्या भएका मानिसहरुले धेरै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ खानेकुरामा। उनीहरुलाई चिल्लो र मासु काम गर्न भनिएको हुन्छ। तर चाडबाड त हो नि भनेर मज्जाले खाइदिने हुन्छन्। पेयपदार्थहरुले पनि राम्रो गर्दैन। यसले डकार ल्याउने र पेट ढुस्स बनाउने हुन्छ। खानेकुरा खाएपछि बरु सादा पानी तथा कागती पानी पिउनुपर्छ।
दसैं–तिहारपछि कलेजोका बिरामी धेरै बढेर आइराखेका हुन्छन्। ठिक भइसकेका मान्छे पनि फेरि आइराखेका हुन्छन्। कतिपय त धेरै रक्सी सेवन गरेर रगत बान्ता गर्दै आइरहेका पनि हुन्छन्।
हामी जे कुरा पनि सन्तुलन मिलाएर खान जान्दैनाँै। स्वस्थ मानिसले पनि स्वस्थ छु भनेर बढी खानु हुँदैन। दिनभरी एकठाउँमा हलचल नगरी तास खेल्ने, मासु खाँदै बियर खाने गर्दा एक त व्यायाम हुँदैन त्यसमाथि निद्रा पनि पुग्दैन, यसले गर्दा अपच हुन्छ। त्यसपछि धेरैको पेटमा खराबी देखापरिहाल्छ।
हुन त पहिलाको भन्दा अहिले मानिसमा चेतना नआएको होइन। तर, अझै पनि हामीले राम्ररी खान जानेका छैनौं। पहिला मानिसले इच्छाले खान्थे तर अहिले देखाउनका लागि पनि खान्छन्। चाडबाडमा घरघरमा हरेक दिन कहिले यता खाने, कहिले उता खाने गर्नाले उसले चाहिने भन्दा बढी खाइरहेको हुन्छ। कसैले बोलाएको छ भने त्यहाँ जाँदा पनि आफूले ठिक्क मात्रामा खान सक्नुपर्छ।
आफू कति खान सक्छु भनेर थाहा पाउन जरुरी छ। सकेसम्म खाली पेटमा चिल्लो नखानुस्। सन्तुलित रुपमा खानुस्, चाडबाड त आउँछ–जान्छ। चाडबाडलाई खानेसँग मात्र जोड्नु भएन, मनोरञ्जनका कुरामा पनि जोड्न सकिन्छ। परिवारसँग सँगै बसेर खानुस्, घुम्न जानुस् यसले फ्रेस बनाउँछ। समयको सदुपयोग गर्नुस्। दसैंलाई उत्साहपूर्वक मनाउनुपर्छ।
मासुलाई धेरै दिनसम्म राखेर खानु राम्रो होइन। मासुलाई सुकाएर राख्ने चलन छ, त्यो स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो होइन। सुख्खा मासु राम्रो हुँदैन। पोलेको मासुले राम्रो गर्दैन भनिन्छ। हाम्रो चलनमा एकचोटी पकाएर राख्ने र पछिसम्म त्यसलाई तताएर खाने चलन छ ं। बरु एकचोटी काटेर राखेको मासु डिप फ्रिजमा राख्नुस्। जुन दिन पकाउनुहुन्छ, त्यही दिन निकालेर पकाएर खानुस्। एक चोटी निकालेको चिज फेरि त्यो बोसो पगालिसकेको खाद्यपदार्थ फेरि फ्रिजमा राख्नुहुँदैन, त्यो एकदम हानिकारक हुन्छ। बरु जति पकाउनु त्यति मात्र निकाल्नुस्।
हरेक चोटी तताउँदा त्यो तेलको महत्व घटिसकेको हुन्छ। हामीले किन बाहिरको खानाले पेट दुख्यो भन्छाँै ? किन क्याटरिनको खानाले पेट दुखाउँछ त ? एउटै तेलमा बारम्बार खाना पकाइएको हुन्छ। धेरै प्रयोग भइसकेको तेलले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दैन। त्यस्तो तेलले पेट त खराब गर्छ नै, त्यसले क्यन्सर पनि गराउनसक्ने कतिपय अध्ययनमा आइसकेको छ। बाहिर राम्रो ठाउँमा त्यही एकचोटी पकाएको तेल प्रयोग गरिँदैन।
गुलियो खाना पनि राम्रो होइन। विशेषगरी चाडबाडका बेला सुगरका बिरामीहरु सजग हुनुपर्छ। मुख बार्नुपर्ने हुन्छ।
बढी नखाने, ठिक्क खाने
खाली पेट नबस्ने
धेरै मिठाई नखाने
एउटै चिज धेरै तताएर नखाने
कुनै चिज सकेसम्म बढी नखाने